KITRA TOMPONDAKAN’I AFRIKA 2017 : Hifantoka any Gabon indray ny fijerin’izao tontolo izao
Ekipam-pirenena miisa 16 no handray anjara amin’ny fiadiana izay ho tompon- dakan’i Afrika eo amin’ny taranja baolina kitra, izay tanterahina any Gabon manomboka ny 14 janoary izao ary tsy hifarana raha tsy ny 5 febroary 2017. 12 janvier 2017
Mahatratra 52 ny isan’ny lalao rehetra mandritra izay 22 andro. Ny ekipan’I Gabon, firenena mampiantrano ny lalao sy Guinée Bissau no hanokatra ny lalao izay hialohavan’ny hetsika ara-kolontsaina mampiavaka an’i Gabon. Ao amin’ny kianjan’i Libreville no hanatanterahana izany. Marihina fa ankoatra ny amboara lehibe sy ny medaly izay atolotra ny laharana voalohany dia vola manodidina ny 13 miliara Ariary (12 894 500 000 Ariary) na 3, 7 tapitrisa Euros no hatolotra azy ireo.
Ankaotra ny mponina ao Gabon sy ireo Firenena hafa aty Afrika dia mety ho maro ihany koa ireo mpanazatra na tompona klioba any Eoropa sy Azia ary Etazonia no ho tonga hanatrika ity fiadiana izay ho tompondakan’i Afrika ity satria mandritra izany no hitilian’izy ireo izay mpilalao azony vidina mba hilalao ao amin’ny klioba misy azy.
Ankoatra izay dia ny Elefantan’i Côte d’Ivoire izay tompon’ny anaram-boninahitra farany dia anisan’ireo ekipa be herijika mety mbola handrombaka ity Can ity.
Laharana faha-36 eran-tany izy ary nahazo ny medaly volafotsy tamin’ny “Can 2013”.
Ny Faraonan’i Egypta no firenena nandrombaka ny Can betsaka indrindra. Impito nahazo izany izy ireo (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010). Ny Panteran’i Gabon kosa izay ekipa mpampiantrano dia heverin’ ny rehetra fa anisan’ireo tsara toerana handrombaka ity “Can 2017” ity. Indroa niatrika ny ampahefa-dalana (1996, 2012) izy ireo. Ny Liona tsy voafolak’i Kameronina dia inefatra (1984, 1988, 2000, 2002) voahosotra. Voalohany hiatrika Can ny kosa ny Lycaons avy any Ginea Bisao. Ny Fennecs-n’i Alzeria dia indray mandeha nahazo ny Can tamin’ny taona 1990.
In-18 amin’izao kosa ny Aigles de Carthage-n’i Tonizia no hiatrika ny Can.
Ekipa tsy mbola nahazo ny Can kosa ny Lion de la Téranga-n’i Sénégal. Fanintelony ny Warriors-n’i Zimbaboe hiatrika ny Can.